Search သင္​ဇာဝင္​့​ေက်ာ္​ လာ`+x`.8` 8`+8`. - BajarFB.com
Search Results - သင္​ဇာဝင္​့​ေက်ာ္​ လာ`+x`.8` 8`+8`.
8 sept 2021 UDP On The Trail show: Transforming The Gambia, Challenges, and Opportunities.
8 sept 2021 UDP On The Trail show: Transforming The Gambia, Challenges, and Opportunities. UDP TV& MEDIA9Sep · 8.9K views
iPhone 𝗦𝗘, 𝟳,𝟴,𝟴+,𝗫,𝗫𝘀 ရှယ်ကြီးတွေ ရောက်ပြီနော်
𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗘 ,𝗫, 𝗫𝘀, 𝟴, 𝟴+ ရှယ်အလှ အသန့်လေးတွေ ထပ်ရောက်ပါတယ်နော် ချစ်မိတ်ဆွေတို့ 💕💕💕 အာမခံအပြည်အဝဖြင့် ရောင်းဝယ်လဲထပ်များ စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်ပေးနေပါပြီနော် 💕💕 ဗန္ဓုလ ဆိုင် Messager သို့ စာပိုမှာရန် 👉👉👉 m.me/Bandulamobile နယ်အမှာများ ကားတင်ပေးပါတယ်နော် 💕 ယခုအချိန်မှာ ဖုန်းစျေးလေးတွေ မတည်ငြိမ်နေသော ကြောင့် စျေးလေးတွေ တင်မပေးတော့တာပါနော် တချို့က ဒီ Videos ကြည့်ပြီး လာဝယ်ကြတဲ့အခါ အရမ်းအားနာရလို့ပါနော် ဆိုင်ဖုန်း 📞📞 09-260222636 , 09-766655579 09-970322008 , 09-444660637 Telegram Channel မှာလဲ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည် https://t.me/BandulaMobile ဗန္ဓုလ Mobile Fan Group join ရန် 👉👉👉 https://www.facebook.com/groups/206814684573245/?ref=share ဆိုင်( ၁ ) 42 လမ်း 80 / 81 လမ်းကြား မန္တလေးမြို့ ။ 42လမ်း ဂုံးတံတားအနောက်ဘက် အဆင်း 🙏🙏 ပန်းကမ္ဘာရေခဲမုန့်ဆိုင် အနောက်ဘက် 💕 ဆိုင်ဖုန်း 📞📞 09-260222636 , 09-766655579 ဆိုင်(၂ )115 လမ်း 73/74A လမ်းကြား ကျွဲဆည်ကန်ကားကြီးကွင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် မန္တလေးမြို့။ Ph no: 09-257885544, 09-400446219 ဆိုင်ဖွင့်ချိန် ( နံနက် 8:30 မှ ညနေ 7:30 အချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် အားပေးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော် 09-970322008 (ကိုနေတိုး) Pyae Phyo (ဆိုင်ခွဲ ၁) 09444660637 ( ဖိုးဖြူ ) Chan Nyein Aung ( ဆိုင်ခွဲ ၁) 09257885544 Nyein Maung ဆိုင်ခွဲ(2) Bandula Mobile - Myanmar7Oct · 17K views
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ವಿನ್ನರ್ ಮಂಜು! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ #BBK8 #ಬಿಗ್‍ಬಾಸ್‍ಕನ್ನಡ8 #ColorsKannada #ಬಣ್ಣಹೊಸದಾಗಿದೆ #ಬಂಧಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ Colors Kannada 8 Aug · 1.1M views